ရူရှားမလေး အ ရီနာ – Hlataw.com
သူ့ကို ကုလားထိုင်တလုံးမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ သူ့ကို စနှိပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ဇက်ကျော ပုခုံး ကို နှိပ်ပေးရင်း..“ ညိုညိမ်းက ဦးကို ဘယ်လို ခေါ်ရမှာလဲဟင်…” လို့ မေးလိုက်တော့ သူက ပြုံးပြီး “ ဦး ” လို့ဘဲ ခေါ်ပေါ့လို့ ပြန်ပြောပါတယ် ။ ညိုညိမ်းကို အနှိပ်ရပ်ပြီး သူ့ရှေ့ကို လာခဲ့ဖို့ ပြောလို့ သူ့အနောက်ဖက်ကနေ နှိပ်ပေးနေရာက ညိုညိမ်းလည်း သူ့ရှေ့ကို လာခဲ့ရပါတယ် ။ သူက ညိုညိမ်းကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ကြည့်ပြီး..“ မင်း အ၀တ်တွေကို အကုန် ချွတ်လိုက်ပါလား…” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း ဘယ်လောက်ဘဲ ယောက်ျားအတွေ့အကြုံ များခဲ့များခဲ့..ကိုယ့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ လူတယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ဖို့ ရှက်သလိုလိုဘဲ ။ မီးကလည်း ထိန်ထိန်လင်း ဖွင့်ထားတယ် လေ ..။ “ ရှက်မနေပါနဲ့..ချွတ်လိုက်စမ်းပါ …မင်းကိုယ်ကို အ၀တ်မပါဘဲ မြင်ချင်လို့ပါ ..” ညိုညိမ်းလည်း သူ့အမိန့်ကို တသွေမတိမ်း နားထောင်လိုက်ပါတယ် ။ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေကို တခုပြီး တခု ချွတ်ချပစ်လိုက်ပါတယ် ။ သူ့အနားကို တိုးလာဖို့ ပြောပါတယ် ။ သူ့အနားကို ရောက်တော့ ညိုညိမ်းရဲ့ လုံးဝန်းတဲ့ နို့တွေကို သူကိုင်ပါတယ် ။ ဖွဖွလေး ပွတ်နေတာ ။ ညိုညိမ်းရဲ့ နို့သီးလေးတစုံကလည်း မာထောင်နေကြပြီ ။ သူ့လက်ချောင်းတွေက နို့သီးတွေကို ပွတ်နေတယ် ။ ကိုင်တယ် ဆွဲတယ် ။ “ အိုး ” “ မင်းနို့တွေက အရမ်းလှတာဘဲ… ” လို့ သူ လေသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ် ။ နို့အုံတခုလုံးကို သူ ဆုပ်ကိုင်နေပြန်တယ် ။
ညိုညိမ်းလည်း သူ့အကူအညီကို ရချင်တာနဲ့ သူဘာလုပ် လုပ် လုပ်ပါစေတော့ ဆိုပြီး မျက်လွှာချပြီး ခံနေလိုက်ပါတယ် ။ သတင်းစာထဲ ပါပါနေတဲ့ လူကြီးတ ယောက်နဲ့ အခုလို ပတ်သက်ခွင့်ရတာကိုလည်း ညိုညိမ်း အံ့သြကျေနပ်နေတာပါ ။ နို့တွေပြီးတော့ ညိုညိမ်းရဲ့ ဖင်တွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီး လက်ဖ၀ါးနဲ့ ပွတ်သပ်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းရဲ့ ဖင်တွေကလည်း ယောက်ျားတွေ က စစ်ကိုင်းအိုး လို့ ပြောတတ်ကြတဲ့ ဖင်မျိုးပါ ။ စွင့် ကားပြီး ကော့နေတဲ့ ဖင်တုံးတွေပါ ။ သူက ဖင်တုံးတွေကိုလည်း ဖျစ်ညှစ်လိုက် ဆုပ်နယ်လိုက် ဖျတ် ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆော့ကစားနေပါတယ် ။ “ နဲနဲ ကုန်းလိုက်ပေးမလား …” “ ဟုတ် …. ” ဒီလို ကုန်းလိုက်ရင် ဖင်ကြားကနေ အဖုတ်ကြီး ပြူးနေတော့မယ် ဆိုတာ ညိုညိမ်း သိတယ် ။ “ အိုး …ဒီလောက်လှတဲ့ အင်္ဂါစပ်မျိုး တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး….” လို့ သူပြောလိုက်ပြီး ညိုညိမ်းရဲ့ အဖုတ်ကို သူ့လက်ဖ၀ါးနဲ့ အုပ်ကိုင်လိုက်..သူ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပွတ်သပ်လိုက် လုပ်နေတာ အကြာကြီးပါ ။ သူ့ကို အမှတ်တမဲ့ ငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ အာပါးပါး သူ့ပေါင် တန်ပိန်ကျစ်ကျစ်တွေ ကြားက ဒုတ်ညိုညိုကြီးက တအားကြီးထွား မာကျော မတ်ထောင်နေပြီ ။ တကယ့်ကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ အင်္ဂါချောင်းကြီးပါဘဲ…။ ဒစ်လုံးကြီးက မှိုပွင့်ကြီးတပွင့်လိုဘဲ ။ လုံးပတ် တုတ်တုတ်ကြီးကလည်း အသဲယားစရာကြီး ။ အကြောကြီးတွေ အပြိုင်းပြိုင်းထောင်လို့ …။ “ ဦးရဲ့ ဟာကလည်း တအား ကြီးတာဘဲ…ဟီး…တကယ်လှတယ် …. ” လို့ ညိုညိမ်းက သူ့ကို ပြောလိုက်တော့ သူက “ စုတ်မလား….” လို့ ပြန်မေးပါတယ် ။ ညိုညိမ်းကလည်း ခေါင်းညှိမ့်ပြီး…“ အင်း စုတ်ချင်တယ်..”လို့ ဖြေလိုက်ချိန်မှာ သူ့ဒုတ်ကြီး ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ် ။
သူထိုင်နေတဲ့ရှေ့ ဒူးလေးတုပ် ထိုင်ချပြီး လက်တဖက်က သူ့ဟာကြီးရဲ့ အရင်းပိုင်းကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ထိပ်ဖူးဒစ်ကြီးကို စ စုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်း ပါးစပ်ထဲကို သူ့ဟာ တုတ်တုတ်ကြီးက မဆန့်မပြဲ ၀င်နေတာကို သူ သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့် နေပါတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း သူခိုက်သွားစေချင်လို့ ပုလွေပညာရပ်မျိုးစုံကို အသုံးပြုပြီး သူ့ကို စုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ညိုညိမ်းက ဦးသိန်းထွန်းကျော်တုံးကလိုဘဲ သူ့ကို ပါးစပ်ထဲမှာ ပြီးစေချင်ပေမယ့် သူက အပြီး မစုတ်ခိုင်းပါဘူး ။ညိုညိမ်းကို ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်ထောင်ခိုင်းပြီး သူက ကုတင်အောက်မှာ မတ်တပ်ရပ်ရက်နဲ့ လုပ်ပါတယ် ။ သူ့လုံးပတ်တုတ် ဒုတ်ကြီးက ညိုညိမ်း အဖုတ်ထဲမှာ အပြည့်ပါဘဲ ။ ညိုညိမ်း ဘ၀မှာ ယောက်ျားတွေနဲ့ ခဏခဏ ကြုံပေမယ့် ဒီလူကြီးနဲ့ ဖြစ်ရတာကို စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ် သဘောကျမိပါတယ် ။ သူ့အတန်ကြီးကလည်း စွဲမက်စရာကြီပါဘဲ ..။ သူက တချီဘဲ ချပေမယ့် သူလုပ်တာတွေကြောင့် ညိုညိမ်းလည်း “ ပြီး ”ရတာ မို့ အရမ်းသဘောကျမိပါတယ် ။ သူက ပြန်ခါနီးမှာ “ ထပ်တွေ့ချင်သေးတယ် ..သူ နိုင်ငံခြား သွားတဲ့အခါ သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ ..ဘာမှ မပူ နဲ့..” လို့ ပြောတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း သူနဲ့ ထပ်တွေ့ချင်ပါသေးတယ် ။ ဦးသိန်းထွန်းကျော်နဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က “ ညိုညိမ်း..ဒီည မောပြီလား..” လို့ မေးပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ..လို့ ညိုညိမ်းက မေးတော့..“ မမောသေးရင် ကိုယ်နဲ့ လာအိပ်ပါလား..” လို့ပြောပါတယ် ။ သူနဲ့ သွားအိပ်ဖို့ကျတော့ ဟန်ဝင်းအောင်က ဂျေဝင်အုံးမှာ လေ ။ “ ဦးရယ်…ညိုညိမ်း ဘဲက ရှိနေတော့ လုပ်ချင်ရင် ဒီမှာဘဲ လုပ်လိုက်ပါလား..” လို့ ညိုညိမ်းက သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ သူ သဘောပေါက်ပါတယ် ။ သူ့ကို ဟိုလူကြီနဲ့ ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာဘဲ ပေး လိုက်တယ်။
ညိုညိမ်းကို ပေါ်က တက်လုပ်ခိုင်းတယ် ။ သူ့ဒုတ်က ဟိုလူကြီးလောက် မကြီးပေမယ့် မဆိုးပါဘူး ။ သူကျေနပ်သွားပါတယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူက “ အနည်းဆုံး ဘန်ကောက်အထိ အစစ်အဆေး အတားအဆီး မရှိဘဲ ရောက်သွားမှာပါ ညိုညိမ်း …” လို့ ပြောပါတယ် ။ ညနက်နေပြီ ။ ဟန်ဝင်းအောင်က “ ညိုညိမ်း ဘယ် တွေ သွားပြီး ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ..” လို့ မေးတယ် ။ ညိုညိမ်းလည်း နိုင်ငံခြားကို ထွက်ဖို့ တိုင် ပင်ပြင်ဆင်နေတယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ နှစ်ရက်လောက် ကြာတော့ ဦးသိန်းထွန်းကျော်က သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်ပြန်တယ် ။ ဟိုလူကြီးနဲ့ နောက်တခါ ထပ်တွေ့ရတော့ ညိုညိမ်းလည်း အရင်တခါလိုဘဲ သူကျေနပ်အောင် ကောင်းကောင်း မှုတ်ပေးလိုက်သလို အပေါ်က တက်လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ သူ အရမ်းသဘောကျသွား ပြီး သူ ခရီးထွက်တော့မယ်..အသင့်ပြင်ထားတော့..သူနဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ…လို့ ပြောသွားတယ် ။ ဘန်ကောက်ကို ရောက်သွားတယ် ။ ဘယ်သူမှ မတွေ့ဘဲ ပါသွားတာ ။ ညိုညိမ်းတို့ ဘန်ကောက်ကိုရောက်တော့ ဟိုတယ် တခုမှ နေပြီး ဦးသိန်းထွန်းကျော် ပေးလိုက်တဲ့ အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ ကျောက်တချို့ကို ရောင်းချလိုက်ကြတယ် ။ ဘန်ကောက်မှာက ယာယီဘဲ နေကြပြီး တခြားတနိုင်ငံကို ခရီးဆက် ကြဖို့ စဉ်းစားကြတယ် ။ ပိုက်ဆံပေါနေတာကြောင့် ပတ်တရာ ကမ်းခြေကို သွားလိုက်ကြတယ် ။
“ ကိုအောင်..ဒီကိုတော့ ကျောက်ဖုရားတို့ ဇော်ကြီးတို့ လိုက်မလာနိုင်ပါဘူးနော် …” လို့ ညိုညိမ်းက စိတ်ပူပြီး မေးလိုက်တော့ ဟန်ဝင်းအောင်က “ သူတို့က နယ်စပ်လောက်အထိဘဲ လိုက်ရှာကြမှာပါ..” လို့ ပြန်ဖြေတယ် ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် လည်း နပိုလီယန် သူ့ကို ဟိုနှစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဘတ်တာကို ခံပြင်းလွန်းလို့သူ့ညီမလေး မိုနာလီဇာကို ဖမ်းခေါ်ပြီး ဟိုကိုင်ဒီပွတ်လုပ်..တပည့်ကို ပါးရိုက်ခိုင်း လုပ်လိုက်ပေမယ့်ချောလွန်းတဲ့ ချစ်စရာ ကောင်မလေးကို ကြည့်ပြီး သနားစိတ်ဝင်သွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် နပိုလီယန်ကို ခြောက် ချင်လို့ တကယ်ဘဲ မုဒိန်းကျင့်တော့မလို ပုံစံဖမ်းထားခဲ့တယ် ။ ကောင်မလေးကို သူ့ရဲ့ ခြံတခြံ မှာ ဓားစာခံ အဖြစ် ဖမ်းခေါ်ထားပြီး နပိုလီယန်ကို သူ့တပည့်တယောက် နဲ့ တွဲပြီး ဟိုနှစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာခိုင်းထားတယ် ။ တကယ်တော့ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်ဟာ စီးပွားရေးသမား ကျောက်တွင်းတူးသမား..ကျောက်သူဌေး တယောက် ဖြစ်ပေမယ့် လူဆိုးလူရမ်းကားစစ်စစ်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါ ။ မိုနာလီဇာလေး ရှိတဲ့နေရာကို သူ ပြန်သွားမိတယ် ။ ကောင်မလေး ကို လှောင်ထားတဲ့ အခန်းလေးကို ရောက်တော့ ပါးလေးနှစ်ဖက် နီရဲတွတ်နေပြီးမျက်ရည် ကျနေတဲ့ မိုနာလီဇာလေးကို သူတွေ့တယ် ။
ဟာ..ဟိုကောင် အုန်းမြင့် ပါးရိုက်ထားတာ ကောင်မလေး ပါးလေးတွေ နီရဲနေတယ်..တောက် မညှာမတာ ရိုက်တဲ့ကောင်….။ “ အုန်းမြင့်….အုန်းမြင့်….” “ ဗျာ..ဆရာ….” “ မင်း ဘာလို့ ဒီလောက်လှတဲ့ ပါးနုနုလေးတွေကို ရိုက်ပစ်ရသလဲ …” “ ဗျာ..ဆရာ…ဆရာ….ရိုက်ခိုင်း…” “ ငါ ဘယ်လောက်ဘဲ ရိုက်ခိုင်းရိုက်ခိုင်း မင်း ရိုက်စရာလား..မင်း မသင့်ပါဘူး ဘာညာနဲ့ ငါ့ကို ဖြောင်း ဖျသင့်တာပေါ့…” “ ဗျာ….” “ မင်းကို အပြစ်ပေးရမယ် …. ” “ ဗျာ…” “ လတ်တလော..သူကလေးနဲ့ ငါ စကားပြောမလို့..မင်း ကို ငါ မမြင်ချင်ဘူး..” “ ဗျာ..ဟုတ်…” “ မင်းသွားလိုက်ကွာ..ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို မင်း မလာနဲ့..ဝေးဝေးသွား….ခေါ်မှလာ …” ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် တပည့်တွေကို မောင်းထုတ်လိုက်ပြီး မိုနာလီဇာလေးကို အ၀တ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ပေးတယ် ။ သူလုပ်မိတာတွေကို တောင်းပန်တယ် ။ မိုနာလိဇာလေးလည်း ကြောင်ငေးနေတယ် ။ ဒီလူကြီး ဘာဖြစ်သွားပါလိမ့် ဆိုပြီး…။ မိုနာလီဇာကို ကားပေါ်တင်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ် ။မိုနာလီဇာ့လက်ထဲကို မြွေ ရေခွံအိတ်လို့ ခေါ်တဲ့ အရင်ခေတ်က ရပ်ကွက်ကောင်စီတွေ ကိုင်တဲ့ အိတ်မျိုးထဲမှာ ငွေငါးထောင်တန် တွေ အထုပ်တော်တော်များများ ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။
“ အကိုကြီး အမှားတွေအတွက် လျော်ကြေးပေးတာ…အကိုကြီး နဲနဲ မှားသွားတယ်..မိုနာလီဇာ ခွင့်လွှတ် ပေးပါ…” လို့ ထပ်ပြီး တောင်းပန်တယ် ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် ရှေ့မှာ နပိုလီယန် ရောက်နေတယ် ။ ခြင်္သေ့ကြီး ရှေ့မှာ ရောက်နေတဲ့ သမင်ပိန်လေးလို တုန်နေတယ် ။ “ ဘယ်လိုလဲကွ..မင်း ဟိုနှစ်ယောက်ကို ပြန်မခေါ်လာပေးပါလား …. ” လို့ မာမာထန်ထန် မေးလိုက်တော့ နပိုလီယန် တုန်ခါနေအောင် ကြောက်လန့်နေတယ် ။ သူ့ညီမလေး မိုနာလီဇာကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်တာတွေက ဆိုးတယ် ။ မိုနာလီဇာ သူ့လက်ထဲ ရှိနေသရွေ့ သူ့ကို မလှန်ရဲဘူး ။ “ မင်းကို သတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်..သိလား…မင်းသိရဲ့လား …. ” “ သိ..သိ…သိပါတယ်….အကိုကြီးရယ်….ကျနော် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ….” “ ငါ့ကျောက်တွေက နည်းတာ မဟုတ်ဖူးကွ …မင်း အတွက်နဲ့ မင်းညီမလေးတော့ မလွယ်ဘူး …… ငါ့အကြောင်း မင်း သိစေရမယ် …” “ မ…..မ…..မ…..မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..ကျနော့်ညီမလေးမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူး …ကျနော့်ကိုဘဲ လုပ်ပါ..ညီမလေး ကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ… ” ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့် အကြောက်လွန်နေတဲ့ နပိုလီယန်ကို ကြည့်ပြီး ရယ်ချင်နေတယ် ။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာထား ပုတ်ပုတ်နဲ့ ဟန်တင်း မာန်ခင်း ထားတယ် ။ “ ဒီတော့ ငါက ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ …. ” “ ကျနော့်ကိုဘဲ ကြိုက်သလို အပြစ်ပေးပါ….ကျနော်ခံပါ့မယ်..ညီမလေးကို လွှတ်လိုက်ပေးပါ…” “ မင်း ငါ့ကို ဘတ်တဲ့အတွက် မင်း တခုခု ပြန်လုပ်ပေးရမယ်..ဘယ်လိုလဲ….” “ ကြိုက်တာ ခိုင်းပါ..ကျနော် လုပ်ပေးပါမယ် ..ညီမလေးကိုသာ လွှတ်ပေးပါ ဆရာ၇ယ်…” သူမသိသေးဘူး ။ သူ့ညီမလေးကို ကျောက်ဖုရားက ငွေတွေနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာ ..။ “ ဟားဟားဟားဟား…..မင်း ညီမလေးအတွက် တော်တော်ဘဲ စိတ်ပူနေတာကိုး..မပူပါနဲ့..အဆင်ပြေ သွားမှာပါ…မင်း လုပ်ပေးရမှာကို ငါပြောပြမယ်…ဒီအနားကို တိုးစမ်း…” နပိုလီယန်လည်း ကျောက်ဖုရား အနားကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ တိုးကပ်သွားတယ် ။
တခုခု လုပ်လိုက် မှာကို သူကြောက်နေတာ ။ ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ ဇော်ကြီးတို့ နေစရာကို မရှိ ဖြစ်နေတယ် ။ ဦးလူကြီးက သူတို့ကို ကြိမ်းမောင်း ဆူဆဲလို့ ။ ကျောက်ဖုရားဇော်မြင့်က ဇော်ကြီး သူ့ကို နပိုလီယန်နဲ့ အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို သုံးပြီး ဘတ်တာကို ဦးလူကြီးကို ပြောလိုက်လို့ ။ ဦးလူကြီးက ငြင်းတော့ နပိုလီယန်ကို ထုတ်ပြတယ် ။ နပိုလီယန်က ဇော်ကြီးရဲ့ အကြံအစည်ပါ လို့ ထွက်ဆိုလိုက်တော့ ဦးလူကြီးက မငြင်းသာဘူး ။ ကျောက်ဖုရားကို ရေလည် တောင်းပန်ရတော့တယ် ။ နပိုလီယန်လည်း မိုနာလီဇာ ပြန်လွှတ်လာတဲ့အပြင် ကျောက်ဖုရားက ငွေထုပ်ကြီး ပေးလိုက်လို့ စိတ် သက်သာရာ ရသွားပြီး ကျောက်ဖုရားရဲ့ တပည့်လုံးလုံး ဖြစ်သွားရတော့တယ် ။ ဦးလူကြီးက ကျောက်ဖုရားကို အိပ်ဖေါ်တီးစုံတွဲကို မမိမိအောင် ပြန်လိုက်ဖမ်းပေးပါမယ် လို့ ဂတိပေးတယ် ..။ ဦးတင်မောင်လတ်နဲ့ ဇော်ကြီးလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အရက်ထိုင်သောက်နေတဲ့အချိန် ဦးလူကြီးရဲ့ သမီး ငယ် ဂန္ဒမာလူကြီး ဦးတင်မောင်လတ်ဆီကို ဖုန်းဆက်တယ် ။ “ ဦးလတ်..မေးစ၇ာရှိလို့…” “ မေးပါ သမီး…ဘာမေးမလဲ…” “ ဟန်ဝင်းအောင် ဘယ်မှာလဲ..ခဏ ဆိုပြီး ဦးလတ် ခေါ်ခိုင်းတာ ..အခု သမီးဆီလည်း ပြန်မပို့ပေးဘူး ” ဦးတင်မောင်လတ် ခက်နေတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်တို့ အကြောင်းတွေ အမှန်အတိုင်း မပြောချင်ဘူး ။ “ အဟဲ..သမီး..သူ ခရီးလွန်နေတယ်…အလုပ်ကိစ္စနဲ့…သမီးအတွက် ဒရိုင်ဘာကောင်းကောင်း တယောက် ရှာပေးမယ်…အဟဲ…စိတ်ချပါ …” “ ဦးလတ်….ဟန်ဝင်းအောင် ကို အလုပ်ခိုင်းတာ စော်နဲ့ လိမ့်ခိုင်းတာလား…” “ ဘာ..ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ သမီး..ဦးလတ် နားမလည်လို့ပါ…”းးလတ်. “ ဦးလတ်..ဟန်ဝင်းအောင် အခု ဘယ်မှာ ရှိလဲ သိလား…” “ မ…မ…မသိဘူး..သမီး….” “ စော်နဲ့ လိမ့်နေတာ..ကဲနေတာ..ဘာအလုပ်ကိစ္စလဲ..ဟွန်း…” “ ဟုတ်လား..သမီးတို့ တွေ့လို့လား..ဘယ်မှာ တွေ့တာလဲ…” ဦးတင်မောင်လတ် အရမ်း သိချင်သွားတယ် ။
လောမကြီးဘဲ အသာ မေးလိုက်တယ် ။ “ မီးနဲ့ တွေ့တာ မဟုတ်ပါဘူး..မီး သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုးတာ…မီးသူငယ်ချင်း …ဖူးစုံရွှေ..တို့ တွေ့ခဲ့တာ..ခုနဘဲ ဖုန်းဆက်တယ် ..ယိုးဒယား…ပတ်တရာ ကမ်းခြေမှာ….ဟွန်း..သူနဲ့ လိမ့်နေတဲ့စော်က ဘယ်သူလဲ သိလား ..ဟွန်း..ညိုညိုညိမ်း…လေ …အရမ်းကဲနေတာဘဲ တဲ့..” “ ဟင်..ဟုတ်လား…” ဦးတင်မောင်လတ် နဲ့ ဇော်ကြီး အိပ်ဖေါ်တီးတို့ ဘယ်မှာ ရှိတယ် ဆိုတာ သိသွားပြီ ။ ဇော်ကြီး ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တယ် ။ လျှောက်လမ်း မှာဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်းတို့ လက်ချင်းချိတ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေတယ် ။ နိုက်ကလပ်တွေ အမျိုးမျိုးက ကောင်မလေးတွေက သူတို့ကလပ်ထဲကို လာဖို့ ထွက်ခေါ်နေကြသလို မာ ဆတ်ခန်းတွေက တူညီဝတ်စုံနဲ့ ကောင်မလေး တွေကလည်း ဖိတ်ခေါ်နေတယ် ။ မနေ့ညက သူတို့စုံတွဲ မာဆတ် အတူတူသွားလုပ်ပြီးပြီ ။ ကုတင်ဘေးချင်းယှဉ်ထားပြီး အနှိပ်ခံကြတာ ။သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး နိုင်ငံခြားကို လုံးဝ မထွက်ဘူးသေးကြတာကြောင့် ဘန်ကောက်နဲ့ ပတ်တရာက သူတို့အတွက်အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတယ် ။ ကျောက်ကလည်း ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းထားတာကြောင့် အိတ်ကလည်း ဖေါင်းနေတော့ နှုတ်ခမ်းလည်း စိုတာပေါ့ ။ အဖြူကောင်တကောင် ဟန်ဝင်းအောင်အနားကို ကပ်လာတယ် ။ သူ့ကလပ်မှာ စော်တွေ မိုက်တယ် ..လာကြည့်ပါ..ရုရှား အဖြူမတွေ လို့ ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း ရောက်ဖူးတယ် ရှိအောင် သွားချင်တယ် ။ “ ကိုအောင် သွားသာသွား..ညိုညိမ်း ဂျေမ၀င်ပါဘူး …ရောက်ဖူးသိဖူးချင်တယ်…” လို့ တိုက်တွန်းတာနဲ့ ဒီလူနောက်ကို လိုက်သွားလိုက်ကြ တယ် ။ ရုရှားမတွေ အများကြီးဘဲ ။ ဟန်ဝင်းအောင်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း ထိုင်လိုက်ကြပြီး ဘီယာ မှာလိုက် တယ် ။ စင်နိမ့်နိမ်ကလေးပေါ်မှာ ရုရှားမလေးတယောက် တထိန်းထိန်း သီချင်းသံနဲ့အတူ ထိုးထိုး ထွန့်ထွန့်ကနေတယ် ။
ကိုယ်တုံးလုံးတော့ မဟုတ်ဘူး ။ ဘရာစီယာနဲ့ ဘောင်းဘီတိုတိုလေးနဲ့ ။ ဟော..လာပြီ …နဲတဲ့ကောင်မကြီး မဟုတ်ဘူး ။ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့..သူလဲ ဘရာစီယာနဲ့ ဘောင်းဘီပြတ်လေးဘဲ ၀တ်ထားတယ် ။ “ ဟေး…မင်းတို့ ပျော်ရဲ့လား….အပေါ်ထပ် တက်ပြီး ဒီထက် ပျော်စရာတွေ လုပ်လို့လည်း ရတယ်နော်.. ဘာမှမကုန်ကျဘူး…နဲနဲပါးပါးဘဲ….” လို့ လာကပ်ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းက သွားချင်သွားဖို့ ပြောတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်က ညိုညိုညိမ်း မျက်နှာကို သေသေချာချာ စိုက်ကြည့် အကဲခတ်ပြီး “တကယ် ပြောတာလား..ညိုညိမ်း…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းလည်း ရယ်မောပြီး..“ သေချာပါတယ်..ညိုညိမ်းလည်း အတွေ့အကြုံ အသစ်အဆန်း ကြုံချင် တွေ့ချင်တယ် ကိုအောင် …” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း နိုင်ငံခြားသူ ရုရှားမတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပြီ ။ တခါမှ နိုင်ငံခြားသူနဲ့ မလုပ်ဖူးသေးလို့ စမ်းလိုက်ချင်တယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကလည်း ခွင့်ပြုနေ..ငွေကလည်း လျံနေတယ် ဆိုတော့ လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားပေါ့ ။ “ ဘယ်လောက် ပေးရမှာလဲ …”လို့ သူတို့နဲ့ လာထိုင်နေတဲ့ ရုရှားမကို မေးလိုက်တယ် ။ ရုရှားမက “ အမေရိကန် ၁၅၀ ” ပေးရမယ်..အခန်းဖိုး ပေးစရာ မလိုဘူး..မင်း ကြိုက်တဲ့ စော်ကို ရွေးနိုင်တယ်..”လို့ ပြန်ပြောတယ် ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ကလပ်ထဲ ထိုင်နေတဲ့ ကနေတဲ့ ရုရှားမတွေ အားလုံးကို လျှောက်ကြည့်ပြီး ဘယ်ဟာကို ရွေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတယ် ။
သိပ်မြင့်မြင့်ထယ်ထယ်ကြီးတွေကျတော့ သူနဲ့ မကိုက်ဘူး လေ ။ ဟော…တယောက် တွေ့ပြီ ။ သူတို့ နောက်မှ ကလပ်ထဲ ၀င်လာတဲ့ မုတ်ဆိပ်ပါးသိုင်းမွေးနဲ့ ကုလားကြီးတွေကို ဧည့်ခံနေတဲ့ မိန်းမ ။ မဆိုးဘူး ။ ဆံပင်က ခါးလောက်ထိ ရှိတဲ့ အရှည်ကြီး ။ရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့ ဖြောင့်ဖြောင့် ဆံပင်ရှည် ..မျက်လုံးပြာပြာနဲ့ စော် ။ ကိုယ်လုံးလဲ ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ။ “ သူ့ကို ခေါ်လို့ရမလား …” ရုရှားမကြီးက လှမ်းကြည့်ပြီး..“ ရတာပေါ့..သူက ဒို့ကလပ်မှာ အချောဆုံး..အမိဆုံး…သူဆိုရင်တော့၂၀၀ ပေးရမယ်…မင်းတို့၂ယောက်နဲ့ သရီးဆမ်းကိုင်လိုက်ကြပေါ့..မများပါဘူး..၂၀၀ထဲပါ……အခန်းက.ရေချိုးခန်းလည်း ပါတယ် ..”လို့ ပြောတယ် ။ ညိုညိုညိမ်း နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်တော့ ညိုညိုညိမ်းက “ အိုကေတယ်…လုပ်လိုက်ကိုအောင် …” တဲ့ ။ ရုရှားမလေးက လက်လေးဖြန့်တယ် ။ “ ငွေအရင် မစပါ…”တဲ့ ။ ညိုညိုညိမ်းက လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ဒေါ်လာတရာတန် နှစ်ရွက်ကို ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ အိုကေပြီ ။ ဒီတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ရုရှားမလေးနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားလိုက်ကြတယ် ။ အခန်းထဲကို ရောက်တော့ ရုရှားမလေးက သူ့နံမည်က အရီနာ…လို့ ပြောပြတယ် ။ အရက် သောက်အုံး မလား..တဲ့ ။ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း ရုရှားမလေးနဲ့ အပေါ်ထပ်ကို သူတို့ လှေခါးကနေ တက်ကထဲက သူ့ဒုတ်က မာနေပြီ ။ ညိုညိုညိမ်းက “ ကိုအောင်..ဘယ်လိုလဲ..ဒီကောင်မလေးေ၇ာ ညိုညိမ်းကိုရော ဆွဲ နိုင်ပါ့မလား…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ “ ရပါတယ်…” လို့ သူ ဖြေရင်း အ၀တ်တွေကို စချွတ်တယ် ။ ရုရှားမလေးကလည်း ချွတ်တယ် ။
ညိုညိမ်းကလည်း ချွတ်တယ် ။ တခဏချင်း သူတို့ အားလုံး ကိုယ်လုံးတီးတွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ။ အသားညိူစိမ့်စိမ့်နဲ့ ညိုညိုညိမ်း နဲ့ အသားဖြူစွတ်နေတဲ့ ရုရှားမလေးတို့ ခြံရံပြီး ကုတင်ကြီးပေါ်ကို လှမ်းတက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာ ဟန်ဝင်းအောင် လည်း သူ့ကိုယ်သူ ဂျိန်းစဘွန်းမင်းသား လိုပါလား လို့ စိတ်ထဲ ထင်လိုက်မိတယ် ။ မကြာခင် မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ပွဲကြမ်းတွေ စတော့မှာကို သိလိုက်တဲ့သူ့ဖွားဖက်တော် ငနဲက ခေါင်းတထောင်ထောင် ဖြစ်လာတယ် ။ သံဒုတ်ကြီးတချောင်းလို မာကျောနေပြီ ။ ရုရှားမလေးရဲ့ ပေါင်ကြားကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ရွှေဝါရောင် အမွှေး ခပ်ပါးပါးလေး ကို တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ညိုညိုညိမ်းကတော့ ပေါင်ကြားမှာ အမွှေးရှင်းလင်းထားလို့ ပြောင်တလင်းလေး ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နို့တွေကလည်း တင်းမာလုံးဝန်းနေကြဆဲ ။ သူ့ကို ပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး ညိုညိုညိမ်း နဲ့ အရီနာက သူ့ဒုတ်ရှည်ကြီးကို တပြိုင်နက် အတူတူ စုတ်ပေးကြတော့ ငယ်ငယ်ထဲက ကြည့်ဖူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြား အပြာဗီဒီယိုတွေထဲကလို ဖြစ်နေတာမို့ ဟန်ဝင်းအောင်လည်း တအား သဘောကျနေရတယ် ။ဒီဖက်က အရီနာက ယက်လိုက်တဲ့အချိန် ဟိုဖက်က ညိုညိုညိမ်းကလည်း အားကျမခံ ယက်လိုက်နဲ့ ။ နောက်တခါ ညိုညိုညိမ်းက ထိပ်ဒစ်လုံးကို ငုံခဲစုတ်လိုက်တဲ့အချိန် အရီနာက သူ့လဥတွေကို တပြတ် ပြတ်နဲ့ ငုံ့ယက်ပေးတယ် ။ အထိဆုံးကတော့ အရီနာက လဥတွေကို လက်နဲ့ မပြီး သူ့ဖင်ကြားနဲ့ ဖင်ပေါက်ကို ယက်ပေးတာပါ ။
“ အိုး..အား….အား…အီး….ဟင်းဟင်း……” ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေ ထွက်လာတယ် ။ အရီနာလည်း သူကလိတာတွေကြောင့် ဟန်ဝင်းအောင် ဖီးလ်တက်သွားရတာကို သဘောကျ ကျေနပ်ပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ရယ်လိုက်တယ် ။ မိန်းမနှစ်ယောက် အလုအယက် ဆိုသလို စုတ်ယက်ပေးတာတွေကြောင့် သူ့ဒုတ်ကြီးလဲ တွင်းအောင်း ချင်နေပြီး တအားကို တင်းမာနေရတယ် ။ “ တော်..တော်ပြီ …… ” သူတို့ ဆက်မှုတ်ရင် သူ့သုတ်ရည်တွေ တအား ပန်းထွက်လာတော့မယ် ။ သူတို့ကို ကောင်းကောင်း ဗျင်းချင်သေးတယ် ။ “ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လုပ်ချင်သလဲဟင်…” အရီနာက မေးတယ် ။မျက်တောင်ကော့ကြီးတွေနဲ့ ပြာလဲ့တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အရီနာနဲ့ လိင်ဆက်ဆံ ရတာက သူကိုယ်တိုင် အပြာရုပ်ရှင်ထဲ သရုပ်ဆောင်နေရသလို ထင်မိသွားတယ် ။ ပက်လက်အိပ် ပေါင်ဖြဲကားနေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းကို အရီနာက ဖင်ထောင်ပြီး ဘာဂျာကိုင်နေတဲ့အချိန်သူ က အနောက်ကနေ အ၇ီနာ့ကို ဖြုတ်တယ် ။ အရီနာရဲ့ ဖင်ဖြူဆွတ်ဆွတ်တွေကို လက်နဲ့ ဖြဲကားပြီး တံတွေးထွေးထည့်ဖို့ လုပ်တော့ အရီနာက မထွေးနဲ့…ကေ၀ိုင်ဂျယ်လီ ရှိတယ် ဆိုပြီး ဘူးလေး ထုတ် ပေးတယ် ။ အရီနာရဲ့ နောက်ပေါက်ကို လုပ်နေတဲ့အချိန် အရီနာက ညိုညိုညိမ်းကို ဘာဂျာကိုင်တာကို လည်း သူကြည့်ရတာ တော်တော် သဘောကျမိတယ် ။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အားရအောင်စိမ်လိုးပြီး ၄၊၅ ချီလောက် စိတ်ကြိုက် ဆွဲလိုက်ကြတယ် ။
ရုရှားမလေးရဲ့ အရှေ့ပေါက် အနောက်ပေါက်နဲ့ ပါးစပ်ကို စိတ်တိုင်းကျ အပေါက်တိုင်း နှစ်ကာကာလိုးပြစ် အရသာခံရင်း အားလုံး ပြီးစီးသွားတော့ သုံးယောက်သား ရေအတူတူချိုးကြတယ် ရေးချိူးရင်းတောင် ရူရှားမလေးက ကျနော် ဒစ်ကိုလာစပြန်တယ် ပုံစံကတော့ ကျနော့ကိုကြိုက်သွားပုံရတယ်ဗျ သူကလာစတော့ကျနော်လည်း ထူးတော့ဘူးတန်အောင်ဆိူပြီး စိတ်ကို ပြန်နှစ်လိုက်တော့ ကျနော်ငပဲက ပြန်မာလာပါလေးရော အ၇ီနာလည်း ကျတော့ ဒစ်ကို ထူးထောက်စုတ်ရင်း တော်တော် ထန်လာတော့ သူ့ အဖုတ်ဝလေးကို တေ့ပေးတယ် ဒစ်ကကားပြီးမ၀င်တော့ ညိုညိုညိမ်းက ကိုင်ပြီးထည့်ပေးရှာတယ် ကျနော် အရီနာ အဖုတ်လေးထဲ ဖြေးဖြေးချင်းစိမ်းလိုးပေးနေတယ် အရီနာ လည်းညည်းညူးသံများ ထွက်လာကာ သူ့ ဖင်ကြီးကို နောက်ဆုတ်ဆုတ်ပေးလာသည် ကျနော်လည်း လိုးရင်းအရမ်းထန်လာပြီး အကြီမ် ၅၀ လောက်မြန်မြန်လေး ဖောင်းးး ဖောင်းးး…. အသံများမြည်အောင် တွန်းဆောင့်လိုက်တော့ အရီနာလည်း အား၇ကျေနပ်ကာ အဖြူနှစ်များထွက်လာပြီး တဆတ်ဆတ် တုန်ခါကာ ကာမအရသာထူးကိုမိန်းပြီးခံစားနေတယ်။
ညိုညိုညိမ်းလည်းဘေးကြည့်နေရင်း သူ့ အဖုတ်လေးကိုပွတ်နေရှာတယ် ကျတော့ ငပဲ ကလည်း ၅ ချီတောင်ပြီးထားတာဆိုတော့ အပြီးချင်သေးဘဲ ညိုညိုညိမ်း အဖုတ်လေးကိုပြေးမြင်မိတယ် ကျနော်ပြီးဒူးချောင်ပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး ညိုညိုညိမ်းကိုကြွေကန်ပေါ်တင်ပြီးအရည်လေးများဆို့ နေတဲ့ ညိုညိုညိမ်းအဖုတ် ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးသွင်းကာ အရှိန်မှန်မှန်လေး လိုးပေးနေပြီး လီးကလည်းကွဲထွက်မတတ် မာထန်လာပြီး ပြီးချင်လာသည် သူ့ မှာလည်း မျက်လုံးတောင်မဖွင့်နိုင်အောင်ကောင်းနေပုံရသည် ကိုပြီးတော့မယ် ညိုညိုညိမ်း ဟုဆိုတော့ သူလညးပြီးချင်ပြီးတဲ့ ခေါင်းလေးညိမ့်ပြတယ် ကျနော်လည်း တူတူပြီးမယ်ဆိုပြီး အဖုတ်ထဲကို ထိုးနှစ်ကာ အရှိန်ပြင်းပြင်းအချက်ပေါင်းများစွာစောင့်ရင်း သူ့ အဖုတ်ထဲမှ တင်းကားနေသော လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ သူတို့ နှစ်ယောက်ပါးစပ်ထဲကို တေ့ကာ သုတ်ရည်များပါးစပ်ထဲသို့ပန်းထွုတ်လိုက်သည် သူတို့ လည်းအငမ်းမရ ကျနော့ဒစ်ကို အလုအရက်စုတ်နေတာကိုငေးကြည့်ရင်း အတွေ့အကြုံသစ်တွေ အများကြီးရလိုက်လေတော့သည် ..။ပြီးပါပြီ
ထူး ကဲ တဲ့ အရသာ